नेपालगन्ज-१ मा १५ सय बढी मतदाता निरकको र्‍यालीमा – GoodnewsKhabar
नेपालगन्ज-१ मा १५ सय बढी मतदाता निरकको र्‍यालीमा
गुडन्यूज खबर । २०७९ बैशाख २७, मंगलवार २०:३४
नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १ माओवादी केन्द्रका तर्फका अध्यक्षका उम्मेदवार निरक पोखरेलको र्‍यालीमा १५ सय बढी मतदाता स्वतस्फूर्त सडकमा उत्रिएका छन् । वडा भित्रका प्रतिष्ठित उद्धमी, ब्यापारी, बुद्धिजीवी, लगायत सर्वसाधारणको उपस्थिति थियो ।
सफल उद्धमी टंक धामीका अनुसार यसपटकको निर्वाचन अत्यधिक बहुमतले जितिन्छ । धामीले भन्नुभयो´ हाम्रो माहोल असाध्यै राम्रो छ । जनता हाम्रो साथमा छन् । जसले जे सुकै भनोस यसपाली माओवादी नै जित्छ ।` र्‍याली देखेर उम्मेदवारहरुको फुर्ति नै अलग थियो । हसिलो अनुहार बनाएका अध्यक्षका उम्मेदवार पोखरेलले र्‍याली जस्तै ब्यालेटमा मत खस्ने हो भने सजिलै जितिन्छ । नेपालगन्ज-१ मा एकएक माहोल परिवर्तन भएको कार्यकर्ता बताउँछन् ।
गित संगितको साथ घरदैलो हुँदै र्‍यालिमा उत्रिएका कार्यकर्ता हुटिङ र जिन्दावादको नाराले धम्बोजी गुन्जयमान थियो । सडकमा भिडभाड, ओहोरदोहोर गर्न कठिन भएपनि स्वयंसेवकले सडकमा आवागमन गर्न सहज बनाइरहेका थिए । यसरी प्रचारप्रसारमा लागेका नेताकार्यकर्ताको आज अन्तिम दिन हो । मंगलबार आज राती १२ बजे देखि मौन अवधि सुरुहुने निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । बुधबार र बिहिवार पुरै मौन अवधी र शुक्रबार ३० गते मतदान गर्ने दिन हो ।
२०७९ बैशाख २७, मंगलवार २०:३४
नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ माओवादी तर्फका अध्यक्षका उम्मेदवार मुस्ताक अन्सारीले वडामा स्वस्थ्य र शिक्षा निशुल्क गरिने बताउनु भएको छ । वडामा ४ जना एम बि बि एस गरेका डक्टर सहित सर्वसाधारणको घरदैलोमा पुगेर स्वस्थ सेवा प्रदान गरिने अन्सारीले बताउनु भयो । हजार भन्दा बढीको संख्यामा भेला भएका […]
२०७७ माघ १८, आईतवार १४:१८
Bheri Hospital Nepalgunj
२०७८ श्रावण २७, बुधबार १२:२१
गुलरियाका तीस जना किशोरीले एकै पटक उपमेयरसंग संवाद गरे